> Resource> Android> Android-agba ọsọ ngwa? Ego 7 Atụmatụ na iji ọsọ Up Android Mfe
Na-eche crazy banyere Android na-adịghị ewe a iri ari? Oge ọ bụla ị na-emeghe ngwa, ị na-echere maka sekọnd ruo mgbe ọ zara. The ikwu n'ụzọ n'etiti meziri-ewe ogologo oge redraw karịa ha na-eji na-adị. Ị na-adịghị na-anagiderịta a ọ bụla ọzọ. E nwere 5 bara uru Atụmatụ na adị gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba dị nnọọ ka ọ bụ onye ọhụrụ.
1. Nso ma ọ bụ Hichapụ achọghị égwu
Dị ka ị maara, ngwa ọdịnala na-echekwa esịtidem nchekwa nke nwere nanị 1 GB ma ọ bụ 2 GB ohere. Ọ bụ n'ebe dị anya n'ebe iji ọsọ were were mgbe ị na-amasị wụnye nza nke ngwa, karịsịa egwuregwu ngwa. Kedu ihe ka njọ, ụfọdụ ngwa ọdịnala na-agba ọsọ na ndabere. Ka oge na-aga site, gị Android ekwentị na-agba iji nwayọọ na iji nwayọọ.
Na ikpe, ị nwere ike ihichapụ ejibeghi ma ọ bụ ịdị na-eji ngwa site gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba mgbe nile. E wezụga, download na wụnye ụfọdụ Android ọsọ booster ngwa site Google Play, dị ka Booster maka Android - FREE, du Speed ​​Booster 丨 Cache Cleaner, wdg imechi ngwa ọdịnala na-agba ọsọ na ndabere. Site n'ime nke a, ị nwere ike adị n'elu Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba.
2. Clean Caches na ratụ ratụ Files
Mgbe ị na-egwu egwuregwu ngwa, sọfụ internet, nche na fim, wdg na gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba, ọ ga-ike caches na junk faịlụ. Ndị a caches na junk faịlụ rụpụta ihe karịrị oge na-ha ọnụ ọgụgụ, na mgbe ahụ na-eri ihe nchekwa na jiri gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba ala.
Ya mere, na adị gam akporo ekwentị ma ọ bụ mbadamba, ọ dị mkpa maka gị ọcha caches na junk faịlụ bụla ugbu a na mgbe ahụ. Ọcha ngwa caches, ị nwere ike ịga Ntọala> Ngwa Manager. Kpatụ ngwa ị chọrọ ọcha caches na-egosi ya ngwa-akowaputara ihuenyo. Mgbe ahụ, enweta Doro Anya data ọcha caches. Ọcha ọzọ caches, ị nwere ike ibudata ụfọdụ ọkachamara Android Booster ngwa, dị ka MobileGo, dị ọcha nna ukwu, na ndị ọzọ.
Cheta na: Ozugbo ị dị ọcha caches nke ngwa, ya ọganihu, dị ka egwuregwu ọganihu, ga-arahụ. N'ihi ya, were ya n'elu tupu-eme caches ihicha.
3. Factory Data Tọgharia
Factory nrụpụta enyere ihichapu fọrọ nke nta niile data ịchekwa na gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba, ma weghachi ihe niile akpasarade emeputa ntọala. Dị nnọọ aga Ntọala> Tọgharia> Factory Data Tọgharia. Ọ na-ewe otu ma ọ bụ nkeji abụọ. Mgbe ahụ, gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba ga-gbanyụọ na-akpaghị aka. Mgbe ahụ, gị Android ekwentị ga-speeded elu.
Cheta na: ndabere gị mkpa Android data, gụnyere kọntaktị, ozi, ngwa, music, video, foto, na ọzọ, tupu ụlọ ọrụ mmepụta ihe nrụpụta. Ma, ị ga-atụfu ihe ọ bụla.
4. Get Software mmelite
Manufactures mgbe ụfọdụ inupụ ọhụrụ software mmelite ha Android igwe na mbadamba. Ndị a software mmelite na-emekarị idozi chinchi ma welie ọrụ na software ị na-eji. Ya mere, ọ bụrụ na gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba natara software update ozi, ị na-adịghị mkpa na-ala azụ ma na-software update ugbu a. Na-elele software update, ị nwere ike enweta Ntọala> Ihe ngwaọrụ> Software update> Update> Kwenye> OK.
5. Nkpọrọgwụ na Flash a ROM
Dịrị na-enye gị ike iji wepụ ihe bloatwares, igosi usoro, Flash a omenala ROM, na wụnye ụfọdụ Android booster ngwa ọdịnala nke achọ mgbọrọgwụ ohere. E wezụga, Android dịrị enyere overclock na processer nke ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba. Nke a ga-emecha adị n'elu gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba, ma ọ ga-eri elu karịa batrị ihe ọṅụṅụ karịa tupu.
Ego Olee otú Iji mgbọrọgwụ akporo ekwentị ma ọ bụ Tablet na 1 click >>
ego otú Flash a omenala ROM na-akporo ekwentị ma ọ bụ mbadamba >>
6. Malitegharịa ekwentị gị akporo ekwentị ma ọ bụ Tablet
A ngwa ngwa na ụzọ dị mfe na adị gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba bụ Malitegharịa ekwentị ya. Nke a nwere ike imechi-agba ọsọ ngwa ọdịnala na doro anya cache. Ọ bụ ezie na ọ bụ otu nwa oge ụzọ ahụ, ọ na-arụ ọrụ.
7. nweta nkwalite ka a New ekwentị ma ọ bụ Tablet
Gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba bụ ka onye na-adịghị ọbụna ma ọ bụrụ na ị gbalịa niile Atụmatụ n'elu? Ọfọn, ma eleghị anya ọ bụ oge nweta nkwalite ka a ọhụrụ ekwentị ma ọ bụ mbadamba. A ọhụrụ ekwentị ma ọ bụ mbadamba, karịsịa a onye na ọhụrụ version, na-emekarị na-agba ngwa ngwa.
Iji nweta nkwalite ka a ọhụrụ ekwentị ma ọ bụ mbadamba, i nwere ike achọghị ịhapụ data n'azụ:
A zuru ndu ka nyefee data site na otu Android ọzọ >>
A zuru ndu ka Nyefee data si gam akporo ka iPhone >>
Top 10 Samsung MP3 Players na égwu
Olee otú Naghachi ehichapụ Photos si Samsung Galaxy
Otú nyefee Music Gị Android
Esi Free Ringtones maka Android